I-Bayer ibuya kude nesicwangciso sokuqulatha amabango omhlaza we-Roundup kwikamva- Ilungelo laseMelika lokwazi
I-Bayer ibuya kude nesicwangciso sokuqulatha amabango omhlaza we-Roundup kwikamva
ezaposwa ngomhla Julayi 8, 2020 by UCarey Gillam
Umnini weMonsanto uBayer AG uyarhoxa kwisicwangciso sokuqulatha amabango omhlaza weRoundup kwikamva emva kokuba ijaji yomanyano icacise ukuba ayizukusivuma esi sikimu, esinokulibazisa izilingo ezintsha kunye nokunciphisa izigqibo zokugweba.
Isicwangciso senziwe nguBayer kunye neqela elincinci lamagqwetha lafakwa kwinyanga ephelileyo kwiNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMantla saseCalifornia njengenxalenye yeenzame zikaBayer zokuphelisa ukutshutshiswa kwezimangalo esele zikhokelele kwilahleko kathathu kumatyala amatyala amathathu, okumangalisa ukohlwaywa komonakalo kunye nokungoneliseki kwabanini zabelo. Abantu abangaphezu kwe-100,000 e-United States bathi ukubonakaliswa kwe-Monsanto's glyphosate-based Roundup herbicides kubangele ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) kwaye ukuba iMonsanto kudala yazi malunga nokugubungela umngcipheko womhlaza.
NgoMvulo uJaji Vince Chhabria ikhuphe iodolo ukuseta ukumanyelwa kwetyala ngoJulayi 24 kwaye ayicacise ayizukuvuma isicwangciso sokuhlawula. "Wayengathandabuzi malunga nokuchaneka kunye nokuchaneka kwale ndawo icetywayo," u-Chhabria wabhala ngokulandelelana.
Phambi komyalelo wejaji, amaqela amaninzi afaka izaziso zokuphikisana nesicwangciso seBayer; ecaphula "ukuphambuka okukhulu kuqheliselo oluqhelekileyo" kumenyiwe kule ndawo yokuhlala icetywayo.
Ukuphendula, ngolwe-Lwesithathu iqela lamagqwetha elalicwangcise isivumelwano neBayer wafaka isaziso sokurhoxa yesicwangciso sabo.
Isicwangciso sokuhlawulwa esindululweyo samatyala ezenzo zodidi lwexesha elizayo sahlukile kwisivumelwano sokuhlawula iBayer esenziwe namagqwetha kubamangali abasele bagcwalise amatyala kwaye ayilelwe ukunceda iBayer ukuba igcine kwaye ilawule uxanduva lwexa elizayo. Ngaphantsi kolwakhiwo oludityaniswe nguBayer kunye neqela elincinci lamagqwetha abamangaleli ukuhlawulwa kwamanyathelo eklasi bekuya kusebenza kuye nakubani na ovezwe kwi-Roundup ongakhange afake isimangalo okanye agcine igqwetha ngoJuni 24, 2020, nokuba uyayenza okanye hayi Umntu sele efunyaniswe enomhlaza bakholelwa ukuba kungenxa yokuvezwa kweRoundup.
Esi sicwangciso besinokulibazisa ukufakwa kwamatyala amatsha kangangeminyaka emine, kwaye sifuna ukuba kusekwe amalungu amahlanu "ephaneli yesayensi" eya kuthi ithathe naziphi na iziphumo eziza kubakho kumabango omhlaza ezandleni zamajaji. Endaweni yoko, "iPhaneli yeNzululwazi yeklasi" inokumiselwa ukumisela ukuba ngaba iRoundup inokubangela i-non-Hodgkin lymphoma, kwaye ukuba kunjalo, kweliphi inqanaba lokuvezwa. I-Bayer iya kuthi inyule amalungu amabini kwiphaneli ezintlanu. Ukuba iphaneli igqibe ekubeni akukho nxu lumano phakathi kwe-Roundup kunye ne-non-Hodgkin lymphoma emva koko amalungu eklasi aya kuthintelwa kumabango anjalo.
Ujaji Chhabria uthathe umba ngalo lonke uluvo lwephaneli yesayensi. Ngokomyalelo wakhe, ijaji yabhala:
"Kwindawo apho inzululwazi inokuthi iguquke khona, kufanelekile njani ukuba sitshixe kwisigqibo esivela kwiphaneli yesayensi kuwo onke amatyala exesha elizayo? Ukuvavanya, cinga ukuba iphaneli ithathe isigqibo kwi-2023 ukuba i-Roundup ayinakho ukubangela umhlaza. Emva koko khawufane ucinge ukuba isifundo esitsha esithembekileyo sipapashiwe ngo-2028 esisingela phantsi kakhulu isigqibo sepaneli. Ukuba umsebenzisi we-Roundup ufunyaniswe ene-NHL ngo-2030, kufanelekile ukubaxelela ukuba babotshiwe sisigqibo sango-2023 sephaneli kuba bengakhange baphume kwisivumelwano ngo-2020? ”
U-Bayer uthe uzakubeka bucala i-1.25 yezigidigidi kulungiselelo. Imali yayiza kusetyenziselwa ukubuyekeza amalungu eklasi afunyaniswe ene-NHL "ngeziphumo zokulibaziseka" kwizimangalo, kunye nokuxhasa ngezimali uphando malunga nokufunyaniswa nokunyangwa kwe-NHL, phakathi kwezinye izinto.
Amagqwetha abamangali ababeka isicwangciso kunye neBayer bema ukwenza ngaphezulu kwe- $ 150 yezigidi kwimirhumo ehlawulwa yiBayer. Ayizizo iifemu zomthetho ezifanayo ezikhokelele isimangalo ukuza kuthi ga ngoku. Eli qela leefemu zomthetho libandakanya uLieff Cabraser Heimann & Bernstein; Uphicotho-zincwadi kunye namaqabane; Ifemi yoMthetho eDugan; kunye negqwetha uSamuel Issacharoff, uNjingalwazi kaReiss woMthetho woMgaqo-siseko kwiSikolo soMthetho kwiYunivesithi yaseNew York.
Amalungu aliqela eefemu zomthetho akhokelayo aphumelele izilingo ezintathu zomhlaza weRoundup ayasichasa isicwangciso sokulungiswa kwamanyathelo eklasi, esithi iya kuhlutha amalungelo abamangali ngeli xesha ityebisa amanye amagqwetha angazange abekho ngaphambili kwityala leRoundup.
Akucaci ukuba ukurhoxiswa kwesi sicwangciso sokulungiswa kwamanyathelo eklasi kunokuchaphazela njani ukuhlawulwa okukhulu kwamabango akhoyo. Bayer kwinyanga edlulileyo izakuhlawula ukuya kuthi ga kwi-9.6 yezigidigidi zeedola ukusombulula iipesenti ezingama-75 zamabango akhoyo ngoku kwaye iya kuqhubeka nokusebenza ukulungisa ezinye. Oko kuhlawulwa akufuneki kuvunywe yinkundla.
U-Bayer ukhuphe ingxelo ngolwe-Lwesithathu esithi uhlala "ezimisele kakhulu kwisisombululo esijongana nesimangalo sangoku ngendlela efanelekileyo kunye nesisombululo esisebenzayo sokulawula nokusombulula isimangalo esinokubakho kwixesha elizayo."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ulimo, Bayer, California, inkundla, indawo, EPA, zolimo, ukutya, glyphosate, impilo, herbicides, IMonsanto, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi
Uvavanyo olutsha lomhlaza lwe-Roundup luza ngaphandle kwemizamo yokuhlala eBayer
Isicwangciso sokusombulula iklasi sikaBayer sitsala ingqumbo, inkcaso
Matshi 10, 2021
Isicwangciso sikaBayer sokuzinzisa amabango omhlaza we-Roundup kwikamva sijamelene nenkcaso ebanzi
Februwari 26, 2021
I-Bayer yenza isicwangciso esitsha se-2 yeebhiliyoni zeedola ukuze isuse amabango omhlaza we-Roundup kwikamva
Februwari 3, 2021
Ukusweleka kunye nokuhlala njengoko iBayer iqhubeka nokuzama ukuphelisa ukumangalelwa ngeRoundup